Onye China na-enye onye ọkwọ ụgbọala nke Linear Lighting, Utra Slim Driver, Ul Dimmable Driver
Nkọwa:Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ,Utra Slim Driver,Ọkwọ ụgbọ ala mbụ,Igbe Enwu,,
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n&#39;ahịa > LED Linear Lights Driver
Ngwaahịa nke LED Linear Lights Driver , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ , Utra Slim Driver suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọkwọ ụgbọ ala mbụ R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Voltage Driver Driver 100W Na-adịgide adịgide 100W Na DALI Dimmable  Kpọtụrụ ugbu a
80W Linear Led Driver Dimmable Led Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Linear Led Driver 100W Onye ọkwọ ụgbọala 24V dị na ya  Kpọtụrụ ugbu a
LED Cabinet Lighting Slime Driver 12V  Kpọtụrụ ugbu a
60W Voltage Constant 12V Linear Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
100W 12V Linear LED Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri ụgbọelu 80W na-enye ike 48Vdc Mexico  Kpọtụrụ ugbu a
Led Linear Light Driver 50W 48Vdc  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọala na-eduzi larịị 48Vdc 30W  Kpọtụrụ ugbu a
LED CV 12V Linear Mpepụ ọkwọ ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
Voltage Driver Driver 100W Na-adịgide adịgide 100W Na DALI Dimmable Nkà na ụzụ Onye na-eduzi LED Driver 100W 12V • 12 V, 100 W • ịrụ ọrụ THD n'ogo zuru oke <5% • Ripple na Noise 0.36V p • Nkeji obere
Nkọwa ngwaahịa : • Onye ọkwọ ụgbọ ala 80W • Volta mmepụta 40 V • Max. ikike mmepụta 80 W • Mgbanwe site na PWM / 0-10V / RX / Dali LED dimmers • Nhọrọ oge ndụ ruo 50,000 h • nkwa afọ 5 Ngwa ngwa • Na-ekpuchi ọkụ, ọkụ na-ekwu okwu na facade, ngwakọta...
Linear Led Driver 100W Onye ọkwọ ụgbọala 24V dị na ya
Nkọwa Ndị na-agba ọsọ eletrik na-edozi nsogbu dị n'etiti ọkụ ọkụ na oriọna oriọna. Ha na-eji ọtụtụ dịgasị iche iche nke ike dimming usoro iji na-achịkwa ikanam ụlọ ọkụ, ikanam downlight, ikanam panel ọkụ, ikanam wallwashers, ikanam warara ọkụ na...
Ọkwọ ụgbọala mbụ bụ ọgbọ na-egosi ọdịnihu n'ọdịnihu nke ndị ọkwọ ụgbọala Dịịlị nke eji arụ ọrụ dị elu na ịkpa àgwà dị egwu. Kasị mma nghọta site na 1 - 100% Akwa arụmọrụ nke ruru 93% Ọhụụ ọhụrụ nke 2mains na-enye nhazi na ntanye site na aka Ọnụ...
Nkọwa HR60W-02-12, emepụtara maka maka ime ụlọ na ngwa ahịa (ọkụ azụ Linear, nnukwu ọnụ mmiri linear, troffer, ìhè egwu), iji rụọ ọrụ Linear Lighting Fixtures. Flickr free 0-10V dimming LED Driver 60W 5000mA (Ọkwa ụgbọ elu nke arụmọrụ dị elu ), na...
Nkọwa HR100W-02-12V, nke a kapịrị ọnụ maka eriri voltage na-eduzi, dinaa ngwa ngwa akara, iji rụọ ọrụ Linear Lighting Fixtures. Voltage Constant 12V Flickr free 0-10V / PWM / RX dimkpa Dual Driver Slim 100W 8300mA , na njigide nke 100W, UL, FCC,...
Ejiri ụgbọelu 80W na-enye ike 48Vdc Mexico
Nkọwa HR80W-02, a kwadebere maka ime ụlọ na ngwa ahia (ọkụ igwefụfụ, eriri elu, eriri, ìhè egwu), iji rụọ ọrụ Linear Lighting Solution. Flicker free 0-10V dimming LED Driver 80W 1800mA (Ọkachamara nke arụmọrụ dị elu), na mpaghara elekere 60W ruo...
Nkọwa HR50W-02, e mere maka maka ime ụlọ na ngwa ahịa (ọkụ azụ Linear, nnukwu ọnụ mmiri linear, nsogbu, akara egwu), iji rụọ ọrụ Linear Lighting Fixtures . Flickr na 0-10V dimming LED Driver 50W 1200mA, na njiri elu nke 35W na 50W, UL, FCC, CE...
Ọkwọ ụgbọala na-eduzi larịị 48Vdc 30W
Nkọwa HR30W-02, kpọmkwem emeziri maka ọkụ ọkụ n'ime ime (ọkụ igwefoto, ihe nkwụnye ọkụ, ìhè egwu), iji rụọ ọrụ Linear Lighting Systems . Ịpụ free 0-10V dimm ING Ikanam Driver 30W 750mA, na wattage nso nke 15W ka 30W, Mankeumman, FCC, OA Dabara,...
LED CV 12V Linear Mpepụ ọkwọ ụgbọala
HR60W-02-12, emepụtara maka maka ime ụlọ na ngwa ahịa (ọkụ azụ Linear, nnukwu ọnụ mmiri linear, troffer, ìhè egwu), iji rụọ ọrụ Linear Lighting Fixtures. Flickr free 0-10V dimming LED Driver 60W 5000mA (Ọkwa ụgbọ elu nke arụmọrụ dị elu ), na njiri...
China LED Linear Lights Driver Ngwa
Biko, otu ụlọ ọrụ dị afọ asatọ na-eweta ike dịịrị ndụ gị site na ịmepụta ụlọ ọrụ gị, ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ahịa ahịa, ọdụ ụgbọelu, wdg. Ya na ngwaahịa ya dị mma. Ọkụ ọkụ eletrik na-apụta na afọ ole na ole gara aga, anyị na-ahụ ike nke ngwọta ntanetị, n'ihi ya, n'ime afọ ndị ọzọ, anyị na- emegharị ọkwọ ụgbọala anyị nke Utra maka ụdị ngwaahịa ndị a iji nye gị ebe nchekwa dị ala na-adịghị mma. Ngwa: ikanam ọkụ, ọkụ ndị na-emepụta eriri, ihe nkedo.
LED Linear ọkụ ọkwọ ụgbọala kpọmkwem maka akara linear, ọkwọ ụgbọala ime ụlọ maka ndị na-enweghị mmiri, oge dị ugbu a na aluminum / ígwè casing, na ọrụ dimming nke 0-10V / PWM / RX / dali. Flicker n'efu na SELV Nchọpụta mmepụta nchedo, UL / FCC / TUV / RCM / CB / CE Certified. Europe na North America ahịa.
Voltage nke mbata: 100-277V / 100-240V
Voltage mmepụta: 25-40V / 12V / 24V
Ugbu a: 100-1800mA / 2500mA / 5000mA
Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ Utra Slim Driver Ọkwọ ụgbọ ala mbụ Igbe Enwu Nnukwu Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ